Ishishini kwishishini lokuThengisa ngenye indlela | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 19, 2013 NgoLwesibini, Septemba 17, 2013 Douglas Karr
Elinye lamathuba abathengisi beShishini ukuya kwiShishini (B2B) kukubamba ukugcwala kwabantu abafuna ezinye iindlela. Abantu baphanda ukuthengwa kwesicelo okanye abonwabanga kwaye banqwenela ukushiya umthengisi-basebenzise amagama anje enye indlela yokuba, okanye iyelelene kwi, okanye izicelo ezinje nge ukuchaza uphando lwabo.
Nanku umzekelo omkhulu-ukukhangela ezinye iindlela zeWufoo:
IFomstack ilisebenzise eli thuba lokukhangela ngokwakha ifayile ye- iphepha elichazayo elichaza iintloko ukuya kwintloko izibonelelo zokusebenzisaIFomstack ngaphezulu kweWufoo. Kwaye, ewe, kuba iphepha lifanelekileyo kwaye bakwizinga eliphezulu kakhulu. Ndingakhuthaza nawuphi na umthengisi ukuba apapashe amaphepha angaphakathi athelekisa aze athelekise izicelo zawo kukhuphiswano lwawo. Yiba nobulungisa ukuze unganikwa i-butt yakho! 🙂
Ukongeza, kukho imikhombandlela embalwa phaya ngaphandle yokuqinisekisa ukuba udwelisiwe:
enye indlela - isikhombisi esikhulu sesoftware enye enezikhundla ezibalaseleyo kwiinjini zokukhangela (nangona ndifumana uluhlu lwezicelo kunye neziphumo zihlala zingachanekanga).
USerchen -Injini yokukhangela yokufumana usetyenziso lwelifu… kubandakanya uphononongo.
GetApp -Indawo yokujonga kwakhona isoftware yokufumana usetyenziso.
ezingakumbi Indawo eneenkcukacha efumana iiwebhusayithi ezifanayo. Oku kubandakanya ilifu kunye neSoftware njengezicelo zeNkonzo.
Uphengululo lweSayithi - enye indawo yolawulo efumana iiwebhusayithi ezifanayo. Oku kubandakanya ilifu kunye neSoftware njengezicelo zeNkonzo.
Qiniseka ukuba usebenzisa olu phando njengoko usazisa ishishini lakho elitsha. Yakha amaphepha angaphakathi aphuculweyo akhuthaza usetyenziso lwakho ngaphezu kwabakhuphisana nabo. Ndingakha iphepha kukhuphiswano ngalunye oluphezulu. Ukongeza, qiniseka ukuba wenze ukuba izicelo zakho zidweliswe kwezi ndlela zingasentla zokukhangela kunye nezikhombisi. Ngaba unazo naziphi na ezinye izalathiso onokuzicebisa? Yongeza kubo kwizimvo!
tags: enye isoftwareenye indlela yokubaiinjini zokukhangela usetyenzisoizicelo zikhangelab2bb2b ezinye iindlelaiyelelene kwi